Legends of Rome, hatramin'ny niorenany ka hatramin'ny vanim-potoana medieval | Vaovao momba ny dia
Angano an'i Roma
Luis Martinez | 07/05/2021 10:35 | kolontsaina, Roma
Ny angano any Roma dia miorim-paka ao am-piandohan'ny Tanàna Mandrakizay. Araka ny fantatrao, ny fototra iorenany dia manana tantara malaza ao ambadik'izany, ny Romulus sy Remus. Fa, ho fanampin'izay, ny tanàna manana tantara marobe dia tsy maintsy mitahiry tantara angano maro hafa izay hahaliana anao ny hahafantatra.
Tsy ho afaka hilaza aminao daholo izahay, fa afaka manome toky anao izahay fa ireo tantara hotantarainay anao dia anisan'ireo angano sarobidy indrindra any Roma ary hahafinaritra anao ny mahafantatra azy ireo. Tsy amin'ny zava-poana dia misy tantara mifandraika amin'izany mpanjaka voalohany, miaraka amin'ny amperora lehibe avy amin'ny vanim-potoana kilasika sy amin'ny maizina Moaenazy an'ny tanàna italiana tsara tarehy (eto izahay dia avelanay lahatsoratra momba ny tsangambato misy azy). Saingy, tsy mila adim-potoana intsony, andao handeha ny tantara angano tsara indrindra momba ny Tanàna Mandrakizay.
1 Ny angano any Roma, hatramin'ny nananganana ny tanàna
1.1 Ny angano nananganana an'i Roma
1.2 Ny fanolanana ny vehivavy sabine, angano romana malaza iray hafa
1.3 Ny lalan'ny Mazzamurelli
1.4 Castel Sant'Angelo, sehatry ny angano maro any Roma
1.5 The Passetto di Borgo
1.6 Nosy Tiber
Ny angano any Roma, hatramin'ny nananganana ny tanàna
Araka ny efa nolazainay taminareo, ny fiavian'i Roma dia manana tantara mitohy. Fa toy izany koa ny fizarana malaza an'ny fakana an-keriny ny sabina, noho ny nitomboan'ny tanàna romana taloha tamin'ny alina nisy azy. Andao handeha miaraka aminy daholo.
Ny angano nananganana an'i Roma
Romulus sy Remus noentin'ilay amboadia
Ny niandohan'ny angano an'i Roma dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i Kristy. Na izany aza, io angano an'i Roma io dia manomboka aloha kokoa aza. Ascanio, zanakalahin'i Enea, ilay mahery fo Trojan, niorina teo amoron'ny Tiber tanànan'i Alba Longa.
Taona maro taty aoriana dia nantsoina ny mpanjakan'ity tanàna ity Numitor Ary ny rahalahiny Amulium nandroaka azy. Saingy tsy nijanona teo ny asa ratsy nataony. Ka mba tsy hanana zanaka afaka mitaky ny seza fiandrianana ny voalohany dia notereny ny zanany vavy, Rea Silvia, ho lasa Vestal, izay nitaky azy hijanona ho virijina. Na izany aza, ny ratsy Amulio dia tsy nihevitra ny sitrapon'andriamanitra Martsa.
Ity iray ity dia nitondra an'i Rea bevohoka tamin'ireo kambana Romulus sy Remus. Saingy, rehefa teraka izy ireo, noho ny tahotra sao hamono azy ireo ny mpanjaka ratsy fanahy, dia napetraka tao anaty sobika izy ireo ary navela tao amin'ny reniranon'i Tiber ihany. Ilay sobika dia nidoboka teo akaikin'ny ranomasina, teo akaikin'ny havoana fito, izay nahitan'i a she Wolf. Nanavotra sy nampinono ireo zaza tao an-tranony izy Havoana Palatine mandra-pahitan'ny mpiandry ondry azy ireo, izay nitondra azy ireo tany an-tranony, izay nitaizan'ny vadiny azy.
Rehefa olon-dehibe izy roa lahy dia nandroaka an'i Amulio ary nisolo an'i Numitor. Fa ny zava-dehibe indrindra amintsika amin'ny tantarantsika dia i Romulus sy Remus koa dia nanangana zanatany Alba Longa teo amoron'ny renirano mihitsy, tany no nihinanan'ny amboadia azy ireo, ary nantsoina ny mpitarika azy ireo.
Saingy, ny adihevitra momba ny toerana marina hananganana ilay tanàna vaovao dia nitarika fifandirana mampalahelo teo amin'izy roa lahy izay hiafara amin'ny Ny fahafatesan'i Remo eo an-tanan'ny rahalahiny. Araka ny angano dia lasa i Romulus ny mpanjaka voalohany tany Roma. Raha te hijery tsara ny mpahay tantara tamin'ny andro taloha isika dia tamin'ny taona 754 talohan'i Kristy.
Ny fanolanana ny vehivavy sabine, angano romana malaza iray hafa
Ny fanolanana ireo vehivavy sabine
Tamin'ny andron'i Romulus koa dia an'ny tantaran'ny fakana an-keriny ny vehivavy Sabine, iray amin'ireo angano romana malaza indrindra. Voalaza fa nanaiky izay olona avy any Lazio ho olom-pirenena vaovao ny mpanorina ny tanàna mba hipetrahany.
Na izany aza, dia lehilahy daholo izy ireo, izay nahatonga ny fitomboan'ny Roma tsy ho afaka. Nahamarika i Romulus avy eo ny zanakavavin'ny sabina, izay nipetraka teo amin'ny havoana akaikin'ny Quirinal ary nikasa haka an-keriny azy ireo izy.
Mba hanaovana izany dia nanipy fety lehibe izy ary nanasa ireo mpiara-monina aminy. Rehefa gaga ny Sabine tamin'ny divay dia naka an-keriny ny zanak'izy ireo vavy izy ary nitondra azy ireo tany Roma. Saingy tsy mifarana eo ny tantara.
Nandritra izany fotoana izany dia lasa nitantana ny tanàna izy Tarpeia, izay raiki-pitia tamin'ny Mpanjakan'ny Latino. Raha nanambara ny ady tany Roma izy ireo taorian'ny fakana ankeriny ny zanak'izy ireo vavy, dia nanao fifanarahana tamin'ny mpanjaka ilay zazavavy fa hasehony azy ny fidirana miafina any an-tanàna raha omeny azy ny tanany ankavia ho takalony. Ilay brasele volamena no tiany horesahina, saingy, rehefa fantatry ny Sabines ity fidirana miafina any Roma ity dia nasain'ny mpanjaka nokapohina tamin'ny ampingany ny Tarpeii ary napetany tamin'ny sandriny havia mihitsy.
Na izany aza, ny faran'ity tantara ity dia manana endrika hafa. Milaza izany fa ny Romana, rehefa nahalala ny famadihan-dravehivavy dia nanipy azy avy teny amin'ny hantsana izay nantsoina hoe marina. Vato Tarpeya.
Ary farany, nisy ny fifandonana teo amin'ny Sabines sy ny Romanina. Na ny marina, tsy nitranga izany satria ireo tovovavy nalaina ankeriny nijoro teo anelanelan'ny tafika roa hampitsahatra ny ady. Raha nandresy ny Romana dia hamoy ny ray aman-dreniny sy ny anadahiny izy ireo, raha toa ka mandresy kosa ny Sabines dia avela tsy hanambady izy ireo. Araka izany, vita sonia ny fihavanana teo amin'ireo tanàna roa tonta.
Ny lalan'ny Mazzamurelli
Làlana Mazzamurelli, sehatry ny angano romainina hafa
Raha mitsidika ny Trastevere Roman, hahita lalan-kely ianao, manomboka fiangonan'i St. Chrysogonus, maninjitra an'ny San Gallicano. Ity làlana ity dia an'ny ny Mazamurelli. Fa iza moa ireo zavaboary ireo izay manana arabe any Roma aza atao anarany araka ny anarany?
Azontsika atao ny mamantatra azy ireo amin'ireo ankizy kely ireo jeneraly maditra izany dia ampahany amin'ny angano rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izy ireo dia ho karazana elf izay mankafy manao fika kely amin'ny mpandalo ary, mazava ho azy, ireo izay mipetraka eo amin'io arabe io.
Raha ny marina, ny iray amin'ireo tantara mandrafitra an'io angano io dia nilaza fa nisy lehilahy niaina lehilahy malaza manana mpanao majia tamin'ny fahitana zavaboary mihoatra ny natiora. Ny tranon'ity olona ity dia mbola voatahiry eny an-dalana ary voalaza fa fiantraikany.
Na izany aza, tsy ny zava-drehetra no ratsy manodidina an'i mazzamurelli. Ho an'ny mpitantara hafa amin'ity angano romana ity dia zavaboary mahasoa izy ireo izay natokana hiaro ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny arabe mitondra ny anarany.
Castel Sant'Angelo, sehatry ny angano maro any Roma
Ho fanampin'ny iray amin'ireo tsangambato manan-danja indrindra amin'ny tanàna mandrakizay, ny Castel Sant'Angelo dia manana angano maro. Namboarina ho Mausolika an'ny Emperora Hadrian, efa ho roa arivo taona ny tantarany. Tsy hahagaga anao, noho izany, fa efa niseho tamina tantara tantara angano maro io.
Ny tena malaza amin'izy ireo dia ny antony mahatonga ny anarany. Ao amin'ny taona 590 amin'ny vanim-potoana iainantsika isika. Areti-mandringana areti-mandoza no nahazo an'i Roma sy ny papa Gregory Lehibe nandamina filaharana. Rehefa nanakaiky ny lapa izy dia niseho teo amboniny arkanjely fa nanana sabatra teny an-tànany izy hanambara ny fiafaran'ilay valanaretina.
Noho izany dia tsy ny lapa ihany no antsoina hoe de Sant'Angelo, fa koa, ny sarin'ny arikanjely dia natsangana teo amboniny, rehefa avy namerina famerenana amin'ny laoniny maro ianao dia mbola afaka mahita ianao ankehitriny.
Passetto di Borgo, iray amin'ireo sehatr'ireo angano maro any Roma
Tsy lasa lavitra amin'ny fananganana teo aloha isika mba hahitana teboka Romana hafa feno angano sy tantara angano. ATSINANANA passetto na ny lalana manda dia manatevin-daharana, ny mariky ny Sant'Angelo miaraka amin'ny Vatican.
Sahabo ho antsasaky ny kilaometatra izy io, saingy efa niseho ny karazan-karazany rehetra namoaka ovy sy mpitondra fivavahana hafa izay nitady hiafina tamin'ny fotoan'ny ady sy ny fandrobana entana. Na izany aza, nilaza ilay angano fa izay miampita azy im-polo dia ho hitany ny hiafaran'ny olana rehetra.
Ny angano dia ny tantaran'ny passetto di Borgo izay nipoitra tamin'ny sarimihetsika, tantara mitohy amin'ny fahitalavitra ary koa lalao video.
Vita ny fitsidihanay ny angano Roma eto amin'ity nosy ity, izay mbola hitanareo ankehitriny eo afovoan'ny Tiber. Toy ny sambo ny endriny ary zara raha 270 metatra ny halavany ary 70 ny sakany. Na izany aza, io dia efa lohatenin'ny tantara angano hatramin'ny taloha.
Raha ny marina dia misy fiatraikany amin'ny endrik'izy ireo manokana. Voalaza fa ny mpanjaka farany tany Roma, Tarquinio ilay mahery, natsipy tao anaty rano ny mpiray tanindrazana aminy. Lehilahy mpanao kolikoly izy ary nangalatra ny varin'izy ireo aza. Fotoana fohy taorian'io fisehoan-javatra io dia nanomboka nipoitra ny nosy ary nihevitra ny Romana fa niavy noho ny sediment voangony nanodidina ny vatan'ny mpanjaka, ny ampahany tsara dia, mazava tsara, ny vary nangalariny.
Noho izany rehetra izany dia namafy foana ny Tiberina TAHOTRA eo amin'ny olom-pirenenan'i Roma. Naharitra an-jato maro izany mandra-pahatongan'ny valanaretina pesta, a bibilava (mariky ny fitsaboana) izay namarana ny aretina. Misaotra anao fa nanangana ny Romana tempoly ho fanomezam-boninahitra an'i Aesculapius ao amin'ny nosy ary nijanona tsy hatahotra ny hitsidika azy intsony. Mampahatsiahy anao izahay fa io tarehimarika io dia andriamanitra Romana tamin'ny fanafody.
Ho famaranana, efa nilaza taminay ny sasany amin'ireo malaza indrindra izahay angano romana. Na izany aza, ny tanàna tranainy toy izany dia tsy maintsy misy hafa. Anisan'ireo nijanona teo amin'ny fantsona ary angamba holazainay aminao amin'ny lahatsoratra iray hafa ilay iray manondro Emperora Nero sy ny Basilika any Santa Maria del Pueblo, Ilay iray amin'ireo Dioscuri Castor sy Pollux, ny an'ny Vavan'ny Fahamarinana na ny maro izay manana ny maha-izy azy Hercules.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Roma » Angano an'i Roma
Akanjo Jalisco mahazatra
Dihy mahazatra an'ny faritra Karaiba